फोहरमैलाको बैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन विषयक अन्तरक्रिया – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ श्रावण ११ गते शुक्रबार १५:३८ मा प्रकाशित
फोहरमैलाको बैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा बिहीबार पोखरामा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
ग्रिन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको आयोजनामा महानगरमा जथाभावी फालिने प्लाष्टिकजन्य फोहोरहरुले सहरलाइ कुरुप बनाएको सन्दर्भलाई अन्तरक्रियाबाट व्यवस्थापनको उपाय खोजिएको थियो । उक्त अवसरमा ग्रिन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्टका सञ्चालक विमल बसेल, इन्जिनियर विमल बास्तोला र कम्पनी ई. राजीव सुवेदीले फोहरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।
प्लाष्टिक जन्य सामाग्रीहरुबाट सडक पिच गर्नेदेखि, सवारीका लागि इन्धन, छाडा चौपाया र सडकका खाल्डाखुल्डी व्यवस्थापन लगायत विभिन्न योजनाहरु उनीहरुले प्रस्तुत गरे । ग्रिन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्टले पोखरा १४ अनुपम मार्गमा प्लाष्टिककै प्रयोगबाट सडक पिच गरेको थियो ।
प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रस्तुत योजनाको प्रशंसा गरे । विकासका कार्यले गति लिन सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले प्लाष्टिक लगायत अन्य फोहरलाई कसरी उर्जामा परिणत गर्ने ? भन्ने विषयमा युवाहरुले चासो व्यक्त गरेकोमा धन्यवाद दिए ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत कार्ययोजनाबारे छिट्टै छलफल गर्ने जनाउँदै मन्त्री बस्नेतले आगामी विकासका कार्यहरुमा प्रस्तुत योजनाहरुलाई स्थान दिने आश्वासन बाँडे ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशको वातावरणलाई स्वच्छ हराभरा राख्न योजनाले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने बताए । सहरलाई कुरुप बनाउने फोहरमैलालाई दिगो व्यवस्थापन गर्ने प्रस्तुत उपायलाई सरकारले अवलम्बन गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कृष्ण थापा, विन्दुकुमार थापा,राजीव पहारी, ग्रिन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका सञ्चालक सञ्जिव बास्तोला र सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
मन क्षेत्रीले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए ।
तनहुँमा भात खुवाइको भोज खाएका ४१ गाउँले बिरामी
मर्दीको चुचुरोमा टेकेर फर्केपछि आरोहीलाई स्थानीयको भव्य स्वागत